Korea Atsimo: Mpitsikilo, Bitsika ary Sangy · Global Voices teny Malagasy
Tena nampivanàka ireo Koreàna ny halehiben'ny tantara ratsin'ny fanodinkodinana voka-pifidianana
Voadika ny 01 Aogositra 2020 5:18 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra fandrakofana lohahevitra iray manokana nataon'ny Global Voices tamin'ny taona 2014 – Ny rohy tsy misy fanamarihana manokana dia mitondra ho amin'ny lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy)
Koreana manohitra ny tantara ratsin'ny fanodinkodinana voka-pifidianana tamin'ny 2012 sy ny famoretana atao amin'ireo fikambanan'ny mpiasa tao Seoul ny 28 Septambra 2013. Bitsika nalefan'i @zwarin
Saika azo raisina eny rehetra eny ny Wifi eto. Isan'ny iray haingana indrindra ny hafainganam-pandehan'ny aterineto ao amin'ity firenena ity raha oharina amin'ny erantany. Ny renivohiny no nantsoina hoe “renivohitry ny onja mpampita” (bandwidth) erantany. Araka izany dia tsy mahagaga raha hita miantrano eny anaty vovonana an-tserasera ireo adihevitra tena mivaivay indrindra momba ny pôlitika, ny toekarena ary ny kolontsaina ao Korea Atsimo.
Saingy naborak'ireo mpitoroka fa ny governemanta no tena milalao tsy tapaka an'io habaka io.
Tena nampivanàka ireo Koreàna ny halehiben'ny tantara ratsin'ny fanodinkodinana voka-pifidianana tamin'ny 2012 sy ny fitsabahan'ireo sampam-pitsikilovana sangany ao Korea Atsimo.
Nanomboka teo, nisy ny famoretana natao an'ireo fikambanana mpiasa [mg], nampangain'ny governemanta ireo mpitsikera ho mpomba an'i Korea Avaratra [mg], ary ny tontolo iainana ankapobeny ao amin'ny firenena dia tsy mitsahatra ny mitombo mankany amin'ny filàna vaniny amin'ireo mpanao gazety.
Efa taona iray mahery izao, nanao hetsipanoherana ny fanodinkodinana vokapifidianana sy ny fitsabatsabahana manohintohina ny fahalalahana maneho hevitra an-tserasera ry zareo Koreàna Tatsimo, ao anatiny [mg] sy ivelan'ny firenena.
Tantara ratsin'ny fanodinkodinana vokapifidianana
Nandritra ny fifidianana izay ho filoha, natao tamin'ny 2012, nandefa bitsika 1,2 tapitrisa ny National Intelligence Service, ilay sampam-pitsikilovana sangany indrindra ao amin'ny firenena, ary ny Fibaikoana ny Ady anaty Aterineto an'ny Minisiteran'ny Fiarovana kosa nandefa bitsika 23 tapitrisa mba hampitongilanana ny fironan'ny daholobe ho amin'ny tombontsoan'ny governemanta. Tsy hoe fotsiny namely ireo kandidà mpanohitra ireny hafatra ireny, fa koa notondroina ho ‘mpomba an'i Korea Avaratra’ ireo rehetra manakiana ny governemanta,
An'aliny ireo nanohy ny hetsipanoherana ary marobe ireo mpitoroka feno fahasahiana no nanao ampamoaka goavana mifandraika amin'ny halehiben'ny fanodinkodinana vokapifidianana sy ny fanaovana ramatahora. Kanefa, toa mbola maizina hatrany ny làlan-kodiavina.
Azo lazaina ho nivoaka tsy naratra tamin'ilay tantara ratsin'ny fanodinkodinana vokapifidianana ny sasany tamin'ireo mpisehatra fototra; misy ny fanarahamaso vao mainka mihamafy atao amin'ireo sehatra an-tserasera, ka isan'ireny ireo lalao an-tserasera,ny tranonkala miresaka mozika sy kolontsaina; ary ny famoretana misy amin'izao fotoana izao atao an'ireo fikambanan'ny mpiasa, ireo feo mpanohitra, ary izay rehetra vondrona mpampahalala vaovao mitsikera ny governemanta.
*20 Jan South Korea Accused of Rewriting History in High School Textbook
*02 Jan South Korean Authorities Discredit Dissenting Voices as ‘Not-Real’ News
28 Des SARIPIKA: Koreana Tatsimo 100.000 Manohitra Fanodinkodinana Valim-pifidianana, Fanampenam-bava Sendika [mg]
24 Des Korea Atsimo: Tsy Fahombiazana Tsy Mba Fanadino Ny Fandravàna Nataon'ireo Mpitandro Filaminana Miisa 4000 [mg]
21 Des SARIPIKA: Fanoherana Ny Fanodikodinana Ny Hevi-Bahoaka Tamin'ny Fifidianana Filoham-Pirenena Koreana Tatsimo Natao Tao New York, Paris, Londona [mg]
20 Des ‘Tsy Ao Tsara Isika !’ Afisy Mivezivezy Any Amin'ny Anjerimanontolo Koreana Tatsimo [mg]
18 Des Manakana Fihetsiketsehana Any Etazonia Ry ‘Dadabe Daban-Dasantsy’ Avy Any Korea Atsimo [mg]
28 Nov Korea Atsimo : Voampanga Ho ‘Mpomba ny Tavaratra’ Ny Pretra Katolika iray Nitsikera Ny Governemanta [mg]
25 Nov Nandefa Bitsika 24,2 Tapitrisa ny Masoivoho Fitsikilovana Sy Ny Tafika Mba Hanodikodinana Ny Fifidianana Any Korea Atsimo [mg]
23 Nov Mandrisika Ireo Vavahadin-tserasera Lehibe Hifehy ny Vavany Ve i Korea Atsimo? [mg]
*30 Oct South Korea Wants to Regulate Online Gaming Like Drugs and Alcohol
24 Sep Korea Atsimo: Tsipahan'ny Mpitondra Katolika Ny Sampan-dRaharaha Fitsikilovana [mg]
*11 Sep South Korean Film Questioning Warship Sinking Pulled from Theaters
*23 Aug Special Probe into South Korean Spy Agency's Electioneering Falls Flat
*05 Jul Protests Erupt in South Korea Over Spy Agency's Electioneering
01 Feb Nandray Am-po Ny Fitsikerana Azy Ny Sampam-pitsikilovana Ao Korea Atsimo .. ka Nitory [mg]
14 Jan Mihatakataka Amin'ilay Mpiantsehatra Mafana Fo Ara-politika Ny Tele Koreana Tatsimo [mg]
*19 Nov Confessions of Paid Political Trolls in South Korea
Newstapa (Ivontoerana Koreana ho an'ny fanaovana gazety fanadihadiana): nanao fanadihadiana lalina momba ilay tantara ratsin'ny fifidianana ireo tranonkalambaovao tsy miankina napetrak'ireo mpanao gazety niala tamin'ireo mpampahalala vaovao nahazatra mba hiarovany ny fahamendrehany amin'ny asa fanaovana gazety.
Interactive Timeline napetrak'ireo mpampiasa aterineto dia manazava ilay tantara ratsy sarobahana momba ny fanodinkodinana vokapifidianana.
Top-notch infographic miaraka amin'ireo rohy mitondra mankany amin'ireo antontan-kevitra niandohana momba ilay raharahan'ny gazety an-tsoratra Kyunghyang, famoahambaovao liampivoarana be mpahalàla tokoa.